Label Village Arivonimamo : manome tosika ny fizahantany eny ambanivohitra | NewsMada
Label Village Arivonimamo : manome tosika ny fizahantany eny ambanivohitra
Misy ary maro ny toerana mety mahaliana ny mpizahatany amin’iny lalam-pirenena voalohany iny. Antony iray nahatonga ny Label Village any Arivonimamo nanokatra ny tolotra iray, ho an’ireo mpizahatany vahiny sy eto an-toerana izany. Nampahafantarina voalohany , ny faran’ny herinandro teo, ny « Circuit touristique pack découverte ». Tsy fitsidihana toerana manan-tantara fotsiny toy ny mahazatra fa fanomezana tosika ny fizahantany eny ambanivohitra mihitsy, raha ny fanazavana. Miainga avy aty Antananarivo ireo mpizahatany, ka homena safidy amin’izay toerana tiany tsidihina. Misy ireo mpanao asa tanàna, mpamokatra fiarakely vita amin’ny kapoaka any Imerintsiatosika, ireo mpanefy ao Mangatany, ny mpanenona landy any Ao Arivonimamo, sns. Rehefa vita ny fitsidihana, mihazo ny Label Village izy ireo misakafo ka ny nahandro malagasy indray no hasongadina amin’izany. Fialamboly malalaka ny tolakandro, hahafan’ireo mpizahatany mianatra fanorona, katro, sns.
“Nandrisika anay tamin’ity tetikasa ity ny ben’ny kaominina Arivonimamo, ny ofisim-paritry ny fizahantany any Itasy. Nanampy betsaka tamin’ny lafiny teknika, indrindra ny fanofana ireo mpitari-dia kosa ny Cite Arivonimamo sy Ambatonakanga”, hoy ny nambaran-dRabemananjara Hantarizo, tompon’andraikitra voalohan’ny Label Village.
Marihina fa asa fahadimy iandraiketan’ny Label Village ity “circuit touristique” ity. Efa toeram-pialamboly, toeram-piompiana, mpikarakara hetsika ary trano fivahinianana izy ireo.
Tafiditra anatin’izay fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra izay ihany koa ny tolotra iray “pack Hiragasy”. Hisy mantsy ny ady hiragasy hifanandrinan-dry Ramilison Besigara sy Raedisamimanana avy any Sahavato ny asabotsy 16 avrily izao, manomboka amin’ny 10 ora sy sasany atoandro.